sida ay qortay Daily Mirror phone android in Android
Waxaan buugii karaa android in Android kale?
Haa, waxaa suurto gal ah. Technology ayaa waxaa macquul ah in hal ama muraayad karaa Android inay Android.
Fiirsashada dedejinta arjiga ku mobile by horumarinta ka dib oo ka mid ah wax lays mobile dedejiyey joogto ah ayaa waxay keentay in tiro ka mid ah codsiyada la abuuray. Inta badan kuwaas oo la yaab leh oo ka mid ah oo kaliya ay maskaxda ku waayo-aragnimo marka kudayasho in PC ah. Maanta, in hadda waxaa suurtagal ah qaar ka mid ah siyaabaha ay u ordaan codsiyada android on PC, nidaamka ahaa ee ugu horeeyay ay isticmaalaan horumarinta si ay u tijaabiso codsiyada iyo Midkiin kastaaba haatan ku raaxaysan karaan waayo-aragnimo ballaaran ee codsiyada ka faa'iidaysanaya buuxa ee qaababka PC. Waxaa jira tiro ka mid ah codsiyada in ka jawaabo in su'aal ku gubanayso aad sida loo isticmaalo barnaamijyada moobiilllada on PC. Halkaan waxaynu ku eegaynaa qaar ka mid ah kuwa ugu sareeya qiimeeyo ah,
Sidee Mirror phone android in kiniin android
Innovations in technology ayaa loo ogol yahay qaar ka mid ah wixii la hal dhibic Uma aan malaynayn ah. Mid ka mid ah horumar la yaab leh oo dhawaan ayaa awood u leh inay buugii mid qalab smart in kale in qalab kale smart. Tani waxa ay u suurta Mirror android in Android. Mirroring android in android waxaa dhamaadka cusub ee, hal-abuurka xitaa ka mid ah waxaa macquul ah in ay buugii TV'yada by casriga ah ama xitaa aad laptop oo la shaqeeyaan telefoonka sidii fog ah. Waayo-aragnimo waa aan xad lahayn oo ka mid ah, la wadaago, iyo in aad kaniini ciyaaro aad content smartphone Android oo xitaa ku jira dhoofinta aad casriga ah si aad kaniini. Android inay mirroring Android la yaab leh oo kaliya laga yaabaa in aad rabto in aad si ay u tijaabiso. Waxa uu isticmaalaa Bluetooth, Wi-Fi ama xitaa goobaha mobile.
Inkasta oo ay jiraan qalab badan oo android in mirroring android, tusaale ahaan u adeegsan doonaan ScreenShare oo isticmaala ScreenShare Technology in ay oggolaadaan in laba android inay muraayad android dhex Bluetooth, goobaha mobile ama Wi-Fi. Tani waxay awood u waxyaabo kale, waayo-aragnimo daawashada fiican iyo mid ka mid ka heli kartaa internet qalabka kale android marayo shabakad gacanta qalab kale. ScreenShare waa codsi ah oo lacag la'aan ah iyo qaababka ay ku kooban la phone qaybsiga Android la Android kiniin shaqeeyaan. Waxa kale oo isticmaala ScreenShare browser, adeeg ScreenShare iyo qabanqaabiyaha ScreenShare oo kaa caawin maamuli xiriir Wi-Fi ama Bluetooth iyo is-dhaafsiga xogta aad u dhexeeya laba qalab gaara Seme aad.
• kiniin A socda Android 2.3+
• smartphone A socda 2.3+ Android
Sida loo soo dajiyo Codsiyada ScreenShare
Ku xiridda browser ku saabsan qalabka aad android in aad rabto in aad muraayad.
• On Google Play Store, raadiyo ScreenShare oo isticmaalaya qalab aad, ka dibna dooro ScreenShare (phone) app aad kaniini iyo ScreenShare (kiniin) app for telefoonka.
• Ku rakib codsiga labada qalabka in aad rabto in aad muraayad.
Ka dib markii la rakibey waa guul, waxay markaas ka dhigan tahay waxa aad awoodi kartaa in aad isticmaasho xiriir ScreenShare ah.
Android inay Android mirroring dhex Bluetooth
1. Ka bilow adeegga ScreenShare lagu rakibay laba qalab aad rabto in aad muraayad.
ScreenShare> Menu> ScreenShare adeega.
2. Calan aad network wireless in Bluetooth labada qalabka in aad rabto in aad muraayad (tani waa haddii la dhigay Wi-Fi), kani waxaa samayn kara adeegga ScreenShare guriga screen
3. Ka dib dejinta inay Bluetooth, Bluetooth aaday qalabka lagu soo bandhigi doonaa adeegga ScreenShare.
4. Haddii mid ka mid ah ay hindiseen in aad rabto in aad Seme waa kiniin ah, waxaa la bilaabi. Raadi magacaaga casriga ah ee liiska aaday Qalabka lagaga adeego oo ScreenShare. Dooro magacaaga telefoon, OK tuubada si xiriir bilaabo. Connection bilaaban doono ka kiniin.
5. La xidhiidha ayaa la xaqiijiyay in laga faaiidaysanayo OK ku saabsan telefoonka. Tani waa talaabo muhiim ah oo sida ay abuurayaa xiriir ScreenShare.
6. Sida xaqiijinta abuuritaanka xiriir ScreenShare, icon ah muujiyaan doonaa bar xaaladda. Sidoo kale, "Connected" Xaaladda waa in muuqan u ah qalab kale oo ku aaday Qalabka liiska. In ay xaaladdu sugnaatay in aad ku guul dareysato in ay ku xidhmaan markii ugu horeysay, waxaa laga rabaa in aad u sugtid in ugu yaraan 10 ilaa 20 ilbiriqsi, ka dib markii taas oo waxaad yeelan doontaa in ay isku dayaan talaabo 4 iyo 5.
Ka dib markii ay talaabooyin kor ku xusan laga sameeyey guul, qalabka aad doonto ayaa la Seme guul iyo hadda waxa aad bilaabi kartaa in ay ku raaxaystaan ​​waayo-aragnimo in la yimaado. Wixii la xiriira iyada oo Wi-Fi ah ee labada qalabka android. Qaado note of tallaabooyinka kor ku xusan;
• Isku aad laba qalab oo aad doonayso Seme shabakad isku Wi-Fi
• Waxa kale oo aad ku xidhi kartaa kiniin ah in aad telefoonka ee ugu horeeya ee mobile haddii aad la dhoofayso, adeegga Screen labada qalabka aad rabto in aad muraayad, dhigay network wireless sida Wi-Fi, shaashadda adeeg kiniin ah, dooro magacaaga telefoon si ay u bilaabaan xidhiidhka ka, ka dibna dhamayso by rumayn ku saabsan telefoonka.
Iyadoo ScreenShare ayaa loo isticmaali jiray sida tusaale halkan, waxaa jira qalab kale oo badan oo aad isticmaali karto si aad u hesho waayo-aragnimo la mid ah sameeyo. Inta badan qalabka lagala soo bixi karaa online for free halka qaar kalena waa lacag. Qaar ka mid ah qalabka ugu caansan waxaa ka mid ah; Air Playit, Optia, MirrorOp, PeerDeviceNet. Sanbal qalab iyo wadadii ugu wanaagsaneyd habboon waayo-aragnimo waxaad jeclaan sidoo kale waa fikrad fiican, ama aad ka raadin kartaa dib u eegista in lagu qoray users kale oo aad ka qaadan kartaa mid ama laba arrimood oo aad jeceshahay ama aan jeclayn. Inta badan, haddii aanay mar walba qalabka, waxay leeyihiin buugagan in xataa kaa caawin kara inaad aad u bilowdo sida ay xoogaa ka tusaale ScreenShare siiyey in this article dhigo laga yaabo.
> Resource > Android > Hagaha Mirror Your Android inay Android